Izindlela ezi-5 Zokuqondanisa Ukuthengisa Nokumaketha Kokukhulisa Imali engenayo | Martech Zone
Ngaso sonke isikhathi lapho sithatha iklayenti, isinyathelo sokuqala esisithathayo ukuba yikhasimende. Ngeke sibize ngokushesha iqembu labo lokuthengisa. Sizobhalisela i-imeyili newsletter yabo (uma benayo), landa ifa, sihlele idemo, bese silinda iqembu lokuthengisa ukuthi lisithinte. Sizoxoxa ngaleli thuba kube sengathi besingahola, bese sizama ukwenza wonke umjikelezo wokuthengisa nabo.
Isinyathelo esilandelayo esisithathayo ukubuza iqembu lokumaketha ukuthi umjikelezo wokuthengisa ubukeka kanjani. Sibuyekeza isibambiso sokuthengisa esenziwe ukuthengisa. Bese-ke siqhathanisa lokhu okubili. Ungamangala, ngokwesibonelo, kukangaki sibona isethulo sokumaketha esinophawu oluhle esenzelwe iqembu lokuthengisa… kodwa bese sikhonjiswa isethulo esibi sokuthengisa esibukeka sengathi senziwe ngemizuzu eyi-10 ngaphambi kocingo. Kungani? Ngoba ukumaketha okuklanyelwe nje akusebenzi.
Le nqubo ayikona ukuchitha isikhathi - cishe ngaso sonke isikhathi ihlinzeka ngegebe elikhanyayo phakathi kwala maqembu womabili. Ungahle ufise ngisho nokuhlola inqubo yakho. Asikusho lokhu ukuthi ukuthengisa nokumaketha akusebenzi, imvamisa nje ukuthi iqembu ngalinye linezindlela nezisusa ezahlukahlukene. Inkinga lapho kuvela lezi zikhala akukhona ukuthi ukumaketha kumosha isikhathi… ukuthi iqembu lokuthengisa alikhulisi izinsizakusebenza zalo ukunakekela nokuvala ukuthengisa.
Sike sashicilela imibuzo ongayicela ngaphakathi kwenhlangano yakho ukuthi hlola ukuqondiswa kwakho kokuthengisa nokumaketha. UBrian Downard, Co-founder futhi Partner ku-ELIV8 Business Strategies ukuhlanganisile lokhu Izindlela ezi-5 zokwenza ngcono ukuthengisa kwakho nokumaketha… Ngenhloso yokuhlanganisa imali.
Okuqukethwe kufanele kuqhube ukuthengisa, hhayi nje ukuqwashisa ngomkhiqizo - faka ithimba lakho lokuthengisa ekuhlelweni kwakho kokuqukethwe ukukhomba amathuba nokuphikisana iqembu lakho lokuthengisa elizwayo.
Hlela amasu akho wokuhola ngamasu - ukuthengisa kukhuthazelwa ukuthola ukuthengiswa okusheshayo, ngakho-ke bangashiya imikhondo enenzuzo enkulu yokumaketha engathatha isikhathi eside.
Chaza izindlela zokuhola ezifanelekayo zokuthengisa (SQL) - ukumaketha kuvame ukuphonsa konke ukubhalisa njengokuhola, kepha ukumaketha oku-inthanethi kuvame ukukhiqiza imikhondo eminingi engafanelekile.
Dala isivumelwano seleveli yesevisi phakathi kokuthengisa nokumaketha - umnyango wakho wokumaketha kufanele uphathe iqembu lakho lokuthengisa njengamakhasimende abo, ngisho nokuhlolwa ukuthi bakukhonza kanjani ukuthengisa.
Vuselela iphimbo lakho lokuthengisa nesethulo - tshala imali ohlelweni lokuphathwa kwempahla yokuthengisa oluqinisekisa ukuthi izinto zokukhangisa zakamuva ziyahlolwa futhi zikalwe.
Kunezinto ezingeziwe ongazenza ukusiza ukuvumelanisa ukuthengisa nokumaketha. Ukwabelana Ngezinkomba Zokusebenza Okubalulekile (ama-KPIs) njengamathuba akhiqizwayo navalwe / anqotshwe ngebhizinisi ngezindawo zawo zokuthengisa nokuthengisa ezithintekayo kungasiza ukubona ngeso lengqondo ukuthi yimaphi amasu asebenza kahle kakhulu. Ungahle ufise ukushicilela ideshibhodi eyabiwe ukulandelela inqubekela phambili nokuvuza amaqembu lapho kufinyelelwa imigomo.
Futhi qiniseka njalo ukuthi ubuholi bokuThengisa nokuMaketha bunombono owabiwe futhi basayinele uhlelo lomunye nomunye. Ezinye izinkampani zifaka ne-Chief Revenue Officer ukuqinisekisa ukuhambisana.
Tags: ukuqondanisaUkukhangisa Okuqukethwemarketingimikhondo efanelekayoImali engenayoUkunika Amandla Ukuthengisaukuthengisaukuqondanisa kokuthengisaukuthengisa ukuhola okufanelekile
Ukulinganiswa kweMarcom: Enye indlela yokuhlola i-A / B